Ku dhow menu
Dharka ciyaaraha fudud
Ururinta Dayrta Ragga
Uruurinta Dayrta Haweenka
Blog Aragti Casri ah
Gawaarida u dhow
Maraakiibta free meelkasta oo USA ah
iibso Muraayadaha qoryaha Waxaa loo kala saaraa Ragga iyo Haweenka. Markab Gacmeed iyo Diyaar, dhammaan maraakiibta muraayadaha qoryaha ee laga soo qaado USA.
Sort Sort Featured iibinta Best Alphabetically, AZ Alphabetically, za Price, hoose illaa sare Price, sare illaa hoose Taariikhda, jir cusub Taariikhda, cusub in jirka ah
Muraayadaha Muraayadaha 'Zebrawood', Xiddigaha iyo Baararka leh Kiiska Alwaaxda, Kala-daadsan,
Cherry Wood Frame Full, Lagu Kala Qaaday Birta Goo iyo Kiiska Bamboo
Muraayadaha Sandalwood ee dhabta ah, Laydh Buluug ah oo Kala Duwan, Gacan lagu farsameeyay
Muraayadaha Muraayadaha ee loo yaqaan 'Zebrawood Muraayadaha Muraayadaha Buluugga ah ee Dullaysan iyo Kiiska
Muraayadaha muraayadaha muraayadaha ee qaabaysan
Qoryaha Madoow iyo Muraayadaha birta ah, Muraayadaha G15 ee xumaaday oo leh kiiska bamboo
Muraayadaha muraayadaha qorraxda ee loo yaqaan 'Zebrawood Frame' oo buuxa
Qalabka muraayadaha Walnut Wood Club ee muraayadaha indhaha oo wata kiiska bamboo,
Muraayadaha Muraayadda Style-ka ee Walnut-ka loo yaqaan 'Real Walnut Wood Club' oo ah Muraayadaha Muraayadaha, Kala-baxa ah, Gacanta lagu farsameeyay
Muraayadaha Muraayadda Madow ee Habeen-Dhex-madow oo Kiis wata
Muraayadaha Muraayadda Bamboo-midab leh oo Juice ah oo lagu kala calaamadeeyay Kiis
Qorrax dhaca Qoraalada Muraayadda ah, Bamboo Madoow oo leh Kiis Alwaax ah
Muraayadaha Muraayadaha 'Cherry Wood' iyo Acetate-ka ee loo yaqaan 'Polarized Slass'
Muraayadaha Jase New York Royce ee Havana
Muraayadaha Cherry Wood iyo Acetate Muraayadaha Muraayadda leh oo Kiis Leh
Muraayadaha Muraayadaha Nadiifinta Nakhshadda leh ee Skateboard, Lẹnsiyo Kala Duwan oo Madoow
Muraayadaha muraayadda iskudhaf ah ee iskudhaf ah oo iskudhaf ah, Lẹnsiyo kala-go'an, oo leh Kiis
Muraayadaha Muraayadda Qorrax dhaca oo lagu kala calaamadeeyay Qaab Madaw oo buuxa Bamboo iyo Kiis
Meelaha Midabka Granite, Muraayadaha Muraayadda Bamboo, Oo Lagu Kala Qaaday Kiiska Qoryaha
Muraayadaha muraayadaha 'Zebrawood' oo leh Lẹnsiyo Buluug ah
Muraayadaha Casaanka ee loo yaqaan 'Red Stripe Two Tones', oo xardhan oo kala qaybsan
qiimaha joogtada ah $ 70.38 Keydso $ -70.38
Premium Zebrawood Stars iyo Muraayadaha Muraayadaha Muraayadaha, Kala-bixinta, Gacanta Lagu Sameeyay, Ilaalinta UV 400, Lens Anti-Reflective Reflect 3 lenses, Farshaxan Gacmeed, Eco-Friendly
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiiska bamboo, kiishka microfiber bilaash ah, dharka nadiifinta microfiber, silsiladaha muraayadaha indhaha iyo kaarka tijaabada kala qaadista!
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.75 inji - Dhererka Frame: 1.9 inji - Dhererka Macbadka: 5.6 inji.
La ogolaaday: Muraayadaha muraayadaha qalalan ayaa baabi'iya ama yareeya dhalaalka. Muraayadahayaga waxaa si gaar ah loogu talagalay inay bixiyaan 100% UVA iyo UVB ilaalinta xitaa xaaladaha nalalka daran. Iyadoo aan la ilaalin qilaafka, garashada qotoda dheer ayaa hoos u dhacday, aragtida qaldan iyo aragtida midabku way dhacdaa, mararka qaarkoodna, si ku meel gaadh ah ayaa laguugu indho tiri karaa. Kala qaybsanaantu waxay waxtar u leedahay nashaadyo badan oo bannaanka ka socda oo ay ka mid yihiin wadista baabuurta, isboortiga xad dhaafka ah, isboortiga biyaha, iyo kalluumeysiga. Faa’iidooyinka muraayadaha muraayadaha qallafsan ayaan dhammaad lahayn waxayna badbaadin karaan aragtidaada!
Farsamada gacanta Labada muraayadood oo 'Engleberts' ah ayaa si shaqsiyan loogu farsameeyay alwaax qaali ah iyo farshaxan gacmeed. Kala duwanaanshaha miraha alwaaxda awgood, labadoodaba si siman iskumid iskama noqon doonaan. Sidee gaar u tahay.
UV 400 La ilaaliyo: Muraayadaha Muraayadaha 'Engleberts' waxay leeyihiin lenses ilaaliya UV 400. UV 400 muraayadaha ilaaliya ayaa awood u leh inay xiraan falaadhaha iftiinka yar sida 400 nanometer. Tani waxay ka dhigan tahay in meel kasta oo boqolkiiba 99 illaa 100 boqolkiiba shucaaca waxyeelada leh ee qorraxda laga fogeeyo indhaha, taasoo wax weyn ka beddeli karta ilaalinta indhaha.
Wareegyada Guga: Waxay bixisaa dhaqdhaqaaq ballaaran iyo raaxo leh si loo waafajiyo madaxyo kala duwan, sidoo kale awood u leh inay u adkeystaan ​​isticmaalka maalin kasta.
9 Bisadaha Lakabka 3 Lens Cat 3 waa muraayadaha indhaha lagu qiimeeyo ee ugu sareeya ee aad xiran karto oo aad wali wado.
Anti-Reflective: Waxay wanaajisaa aragga, waxay yareysaa culeyska indhaha waxayna ka dhigtaa muraayadaha indhaha inay noqdaan kuwo soo jiidasho leh.
Cajiib ah: Nooca Casriga ah ee loo yaqaan 'Vintage Style' oo qof walba u muuqda mid weyn laakiin taas waad hore u ogeyd. Waxaad U Socotaa Inaad Bogaadiso!
khafiif: Muraayadaha Muraayadaha Wooden-ga ah ee 'Engleberts Premium' ayaa ka fudud balaastigga.
Saaxiibtinimada: Tag Cagaaran adoo iska ilaalinaya muraayadaha caaga ah. Muraayadaha Muraayadaha 'Engleberts Premium Slasslasses' waa kuwo waara. Bamboos waa qaar ka mid ah dhirta sida ugu dhakhsaha badan u koraya ee dhulka iyadoo noocyada qaar ka mid ah laga soo sheegay heerarka koritaanka ee ilaa 3 fuudh 24 saacadood. Bamboo waa caws si dhakhso leh u koraya, uma baahna bacrimin oo iskiis ayuu uga soo baxaa xididdadiisa, marka uma baahna in dib loo beero.
Waxqabadka wanaagsan: Waxaad kuheli doontaa amaan Muraayadaha Muraayadaha Engleberts, hubi inaad u sheegto kuwa ku amaanay adiga halkaad ka heshay. Boom! Camal wanaagsan oo maalinta la qabtay.
100% Qanacsanaanta Qancin: - Waxaan ku kalsoonahay alaabadayada muraayadaha qorraxda ah. Haddii aadan jeclayn kuwaaga, ku soo celi lacag celin buuxda.
At Engleberts Waxaan wax yar ka sii dhignaa muraayadaha indhaha oo aan ka badan kuwa kale. Isagoo mid kastaa gacanta ku sameeyay, isagoo hubinaya in muraayadaha muraayadaha indhaha oo dhami ay kala jaban yihiin, UV 400 la ilaaliyo, ay leeyihiin muraayadaha ka soo horjeedka milicsiga oo ay yihiin miisaan fudud. Waxa kale oo aad ka heli doontaa muraayadahayada oo laga sameeyay alwaax dabiici ah oo dhab ah, Eco-friendly, waara, farshaxanno xardhan iyo muuqaal leh. Waxaan u adeegsanaa biraha birta ah ee birta ah ee birta ah, muraayadaha indhaha ee 'Cat 3 lenses' markii la dhaho oo la dhammeeyo waxaad helaysaa qiime aad u weyn iyo muraayadaha indhaha oo u eg sidaad adigu tahay.
Waxaan ku sareysiin doonnaa lamaane walba kiishka microfiber ee bilaashka ah ee lagu qaadan karo, maro nadiifinta microfiber oo bilaash ah si ay kuugu muuqato jilicsanaanta, xargaha muraayadaha bilaashka ah si aadan u waayin hantidan qaran. Heck, xitaa waxaan ku tuuri doonaa kaarka tijaabada Bilaashka Bilaashka ah si aad u ogaato inaad heshay heshiiska dhabta ah. Dhamaan waxyaabaha yar yar ee lagu daray iibsi kasta oo adiga iyo annaga naga soocaya kuwa kale
Weli ma aynaan dhammeyn, Labadaada qof sidoo kale waxaa ku jira Kiis Bamboo ilaalin ah. Ma jirto hab kafiican oo looga ilaaliyo muraayadaha indhahaaga marka loo eego kiisaska bamboo gacmeed gacmeed qurux badan. Waxay soo koobaysaa urka dhulka ku jira. Waxaad ku farxi doontaa carafta dhulka. Keenista karma wanaagsan dhammaan kuwa leh. (Digniin: Ursashada gudaha kiiskaaga bamboo waxay caado u noqon kartaa sameynta).
Kala Sooc naftaada Muraayadaha Muraayadaha ee loo yaqaan 'Wooden Premium'!
qiimaha joogtada ah $ 48.00 Keydso $ -48.00
OK sidaa darteed xardhaheennu ma helin maalintiisii ​​ugu fiicnayd. On gacanta gudaheeda muraayadaha qoraxda Polarized waxaa lagu higgaadiyaa Polaried. Khaladkeena waa faaiidadaada. Muraayadahan muraayadaha indhaha ayaa loo calaamadeeyay si ay u muujiyaan qaladka waana fursadaada inaad ku dhaliso labo midab oo macaan oo qiimo dhimis ah.
Engleberts Premium Cherry Wood Frame buuxa leh muraayadaha birta gooya. Kalaandaran, Gacan Lagu Sameeyay, UV 400 Ilaalinta, Bisadaha Kahortaga Milicsiga 3 Lens, Eco-Friendly.
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, Microfiber kiish lacag la'aan ah, Maro nadiifinta Microfiber bilaash ah, xargaha muraayadaha muraayadaha bilaashka ah, kaarka tijaabada ee qeexida bilaashka ah iyo rarka bilaashka ah!
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.67 inji - Dhererka Frame: 2.12 inji - Dhererka Macbadka: 5.75 inji.
Laydhka Kala-baxa Muraayadaha muraayadaha qalalan ayaa baabi'iya ama yareeya dhalaalka. Muraayadahayaga waxaa si gaar ah loogu talagalay inay bixiyaan 100% UVA iyo UVB ilaalinta xitaa xaaladaha nalalka daran. Faa’iidooyinka muraayadaha muraayadaha qallafsan ayaan dhammaad lahayn waxayna badbaadin karaan aragtidaada!
Wareegyada Guga: Fiilooyinka Stainless steel waxay siisaa dhaqdhaqaaq badan iyo raaxo si ay ula jaanqaado madaxyo cabbirkoodu kala duwan yahay, waxay sidoo kale muraayadahaaga muraayadaha ka dhigtaa kuwo u adkeysan kara isticmaalka maalin kasta.
Cajiib ah: Muraayadaha muraayadaha ee loo yaqaan 'Engleberts Wooden' waxay leeyihiin qaab guridda oo caadi ah oo raaxo leh oo sifiican u fiiriya qof walba, laakiin taas waad horay u ogeyd. Waxaad U Socotaa Inaad Bogaadiso!
Saaxiibtinimada: Tag Cagaaran adoo ka fogaanaya muraayadaha indhaha ee caagga ah. Muraayadaha Muraayadaha 'Engleberts Premium Slasslasses' waa kuwo waara. Bamboos waa qaar ka mid ah dhirta sida ugu dhaqsiyaha badan u koraya ee dhulka iyadoo noocyada qaar laga soo sheegayo heerarka koritaanka ee ilaa 3 fuudh 24 saacadood. Bamboo uma baahna bacrimin oo iskiis ayuu uga soo baxaa xididdadiisa, marka uma baahna in dib loo beero.
Qiimaha: Labba Engleberts waxay la yimaadaan boorsada microfiber jilicsan oo bilaash ah, maro nadiifinta microfiber iyo xarkaha muraayadaha indhaha.
Muraayadaha muraayadaha indhaha waxay ka tarjumayaan qorraxda oo iyaguna waxay ka tarjumayaan shakhsiyaddaada. Engleberts waxaa loo aasaasay hal sabab: In lagaa dhigo qof asal ah, mid gaar ah, midab leh, mid la yaqaan oo si fiican u muuqda.
Mar alla markii aad tijaabiso kuwan, ma awoodi doontid inaad iska siisid, iyagu waa kuwa raaxada leh, ee shaqeynaya.
At Engleberts waxaan xoogaa yar gelinay muraayadaha indhaha oo aan ka badan kuwa kale. Isagoo mid kastaa gacanta ku sameeyay, isagoo hubinaya in muraayadaha muraayadaha indhaha oo dhami ay kala qaybsan yihiin, UV 400 la ilaaliyo, ay leeyihiin muraayadaha ka soo horjeedka milicsiga oo ay yihiin miisaan fudud. Waxa kale oo aad ka heli doontaa muraayadahayada oo ka samaysan alwaax dabiici ah oo dhab ah, Eco-friendly, waara, farshaxanno xardhan iyo muuqaal leh. Waxaan u adeegsanaa biraha birta ah ee birta ah ee birta ah, muraayadaha indhaha ee 'Cat 3 lenses' oo markii la dhaho oo la dhammeeyo waxaad helaysaa qiime aad u weyn iyo muraayadaha indhaha oo u eg sidaad adigu tahay.
Waxaan ku sareysiin doonnaa labba joornaal Microfiber Bilaash ah oo loogu talagalay qaadista, maro nadiifinta microfiber oo bilaash ah si ay kuugu muuqato jilicsanaanta, Xarkaha muraayadaha bilaashka ah si aadan u waayin hantidan qaran. Heck, xitaa waxaan ku tuuri doonaa kaarka tijaabada Bilaashka Bilaashka ah si aad u ogaato inaad heshay heshiiska dhabta ah. Dhamaan waxyaabaha yar yar ee lagu daray iibsi kasta oo adiga iyo annaga naga soocaya kuwa kale.
qiimaha joogtada ah $ 87.98 Keydso $ -87.98
Engleberts 100% Muraayadaha Sandalwood ee Dhabta ah, Laydh Buluug ah oo Kala Duwan, Gacan Lagu Sameeyay, Ilaalinta UV 400, Kahortagga Milicsiga Bisadaha 3 Lens, farshaxan gacmeed, Eco-Friendly
Sida saxda ah Dadka Astaamaha ah waxay kugula Baxi Doonaan Qalab Koob Muraayadaha Sandalwood-kan ah!
Waxaa ka mid ah: Muraayadaha Sandalwood, Jumlad Microfiber Bilaash ah, Maro Nadiifinta Microfiber Bilaash ah, Xargaha Muraayadaha Bilaashka ah iyo Kaarka Imtixaanka Bilaashka ah ee Bilaashka ah!
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.5 inji - Dhererka Frame: 1.5 inji - Dhererka Macbadka: 5.5 inji.
Features: Laydhka Kala-baxa Muraayadaha muraayadaha qalalan ayaa baabi'iya ama yareeya dhalaalka. Muraayadahayaga waxaa si gaar ah loogu talagalay inay bixiyaan 100% UVA iyo UVB ilaalinta xitaa xaaladaha nalalka daran. Faa’iidooyinka muraayadaha muraayadaha qallafsan ayaan dhammaad lahayn waxayna badbaadin karaan aragtidaada!
Waxaan ku sareysiin doonnaa lamaane walba kiishka microfiber ee bilaashka ah ee lagu qaadan karo, maro nadiifinta microfiber oo bilaash ah si ay kuugu muuqato jilicsanaanta, xargaha muraayadaha bilaashka ah si aadan u waayin hantidan qaran. Heck, xitaa waxaan ku tuuri doonaa kaarka tijaabada Bilaashka Bilaashka ah si aad u ogaato inaad heshay heshiiska dhabta ah. Dhamaan waxyaabaha yar yar ee lagu daray iibsi kasta oo adiga iyo annaga naga soocaya kuwa kale.
Muraayadaha muraayadaha ee loo yaqaan 'Zebrawood Muraayadaha' oo leh Lenses Blue Polarized and Case Wood, HandCrafted, UV 400 Protection, Kahortagga Milicsiga Bisadaha 3 Lenses, Eco-Friendly.
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiiska alwaax, kiishka microfiber bilaashka ah, marada nadiifinta microfiber ee bilaashka ah
Gaadiid lacag la'aan ah!
Cabbirka Baaxadda Meegaarka: 5.75 inji - Dhererka Frame: 1.9 inji - Dhererka Macbadka: 5.75 inji.
Lens Polarized: Muraayadaha muraayadaha qalalan ayaa baabi'iya ama yareeya dhalaalka. Muraayadahayaga waxaa si gaar ah loogu talagalay inay bixiyaan 100% UVA iyo UVB ilaalinta xitaa xaaladaha nalalka daran. Faa’iidooyinka muraayadaha muraayadaha qallafsan ayaan dhammaad lahayn waxayna badbaadin karaan aragtidaada!
At Engleberts waxaan xoogaa yar gelinay muraayadaha indhaha oo aan ka badan kuwa kale. Isagoo mid kastaa gacanta ku sameeyay, isagoo hubinaya in muraayadaha muraayadaha indhaha oo dhami ay kala qaybsan yihiin, UV 400 la ilaaliyo, ay leeyihiin muraayadaha ka soo horjeedka milicsiga oo ay yihiin miisaan fudud. Waxa kale oo aad ka heli doontaa muraayadahayada oo ka samaysan alwaax dabiici ah oo dhab ah, Eco-friendly, waara, farshaxanno xardhan iyo muuqaal leh. Waxaan u adeegsanaa biraha birta ah ee birta ah ee birta ah, muraayadaha Cat 3 markii la dhaho oo la dhammeeyona waxaad helaysaa qiime aad u weyn iyo muraayadaha muraayadaha indhaha ee u gaarka ah sidaad tahay.
qiimaha joogtada ah $ 65.98 Keydso $ -65.98
Muraayadaha Muraayadda Qafiifka ah ee loo yaqaan 'Red Bamboo Tortoise Frams, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Reflect 3 Lenses, Artisan Tredide, Eco-Friendly. Farshaxanle Xardhan
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiiska bamboo, kiishka microfiber, dharka nadiifinta microfiber, muraayadaha muraayadaha indhaha iyo kaarka tijaabada ee kala qaadista.
Cabbirka Baaxadda Meegaarka: 5.9 inji - Dhererka Frame: 1.9 inji - Dhererka Macbadka: 5.9 inji.
Features: La ogolaaday: Muraayadaha muraayadaha qalalan ayaa baabi'iya ama yareeya dhalaalka. Muraayadahayaga waxaa si gaar ah loogu talagalay inay bixiyaan 100% UVA iyo UVB ilaalinta xitaa xaaladaha nalalka daran. Iyadoo aan la ilaalin qilaafka, garashada qotoda dheer ayaa hoos u dhacday, aragtida qaldan iyo aragtida midabku way dhacdaa, mararka qaarkoodna, si ku meel gaadh ah ayaa laguugu indho tiri karaa. Kala qaybsanaantu waxay waxtar u leedahay nashaadyo badan oo bannaanka ka socda oo ay ka mid yihiin wadista baabuurta, isboortiga xad dhaafka ah, isboortiga biyaha, iyo kalluumeysiga. Faa’iidooyinka muraayadaha muraayadaha qallafsan ayaan dhammaad lahayn waxayna badbaadin karaan aragtidaada!
qiimaha joogtada ah $ 54.00 Keydso $ -54.00
Engleberts Premium Wood Wood iyo Muraayadaha muraayadaha birta ah, oo leh kiiska Bamboo. G15 Lenses Polarib, Handcrafted, UV 400 Protection, Kahortaga Milicsiga Bisadaha 3 Lenses, Eco-Friendly.
qiimaha joogtada ah $ 79.18 Keydso $ -79.18
Haddii aad tahay alwaax aficionado ah, kuwan ayaa adiga loogu talagalay.
Engleberts 100% Zebrawood Muraayadaha Frame Frame Full Frame, Lenses Polarib, Handcrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective, CAT 3 Lenses and Eco-Friendly.
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiishka Microfiberka bilaashka ah, Maro nadiifinta Microfiber lacag la’aan ah, muraayadaha muraayadaha muraayadaha ee bilaashka ah iyo kaarka tijaabada bilaashka ah ee bilaashka ah.
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.75 inji - Dhererka Frame: 1.8 inji - Dhererka Macbadka: 5.7 inji.
Engleberts Premium Walnut Wood Club Stlasseslasses, Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Kahortagga Milicsiga Bisadaha 3 Lenses, Farshaxan Gacmeed, Eco-Friendly.
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiiska bamboo, kiishka microfiber, dharka nadiifinta adag ee microfiber, muraayadaha muraayadaha indhaha iyo kaarka tijaabada ee kala qaadista.
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.25 inji - Dhererka Frame: 1.75 inji - Dhererka Macbadka: 5.5 inji.
Qiyaas xirfadaha NASA, TESLA, MIT iyo BMW oo lagu dabaqayo kaliya muraayadaha indhaha, ka dibna ku dhufo taas 5 - waxaad yeelan lahayd Muraayadaha Muraayadaha 'Engleberts Premium'.
Muraayadaha Muraayadda Madow ee Habeen-dhexe oo leh kiiska, Kala-baxa, Gacanta Lagu Sameeyay, Ilaalinta UV 400, Ka-hortagga Milicsiga, Lens 3 Bisadood, Farshaxanno Xardhan, Eco-Friendly.
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiiska bamboo, kiishka Microfiber bilaash ah, dharka nadiifinta microfiber bilaashka ah, muraayadaha muraayadaha bilaashka ah iyo kaarka tijaabada bilaashka ah ee bilaashka ah!
qiimaha joogtada ah $ 68.18 Keydso $ -68.18
Miraha Casaanka ah ee Muraayadaha Bamboo midabbo badan leh, Kala qaybsan, Gacan lagu farsameeyay, Ilaalinta UV 400, Kahortagga Kahortagga Milicsiga Bisadaha 3, Farshaxan Gacmeed, Eco-Friendly.
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.9 inji - Dhererka Frame: 1.9 inji - Dhererka Macbadka: 5.9 inji.
Waxaan ku sareysiin doonnaa lammaane kasta kiishka microfiber ee bilaashka ah ee lagu qaadan karo, maro nadiifinta microfiber lacag la’aan ah oo kaa ilaalinaysa inaad u muuqato mid jilicsan, xargaha muraayadaha bilaashka ah si aadan u waayin hantidan qaran. Heck, xitaa waxaan ku tuuri doonaa kaarka tijaabada Bilaashka Bilaashka ah si aad u ogaato inaad heshay heshiiska dhabta ah. Dhamaan waxyaabaha yar yar ee lagu daray iibsi kasta oo adiga iyo annaga naga soocaya kuwa kale,
Weli ma aannu dhamayn, Labadaada qof sidoo kale waxaa ku jira Kiis Bamboo ilaalin ah. Ma jiro hab kafiican oo looga ilaaliyo muraayadaha indhahaaga marka loo eego kiisaska bamboo gacmeed gacmeed qurux badan. Waxay soo koobaysaa urka dhulka ku jira. Waxaad ku farxi doontaa carafta dhulka. Keenista karma wanaagsan dhammaan kuwa leh.
qiimaha joogtada ah $ 72.58 Keydso $ -72.58
Muraayadaha Muraayadda Madoow ee Habeen-dhexe oo leh kiiska, Lenses-ka Qorrax-dhaca Kala-baxa ah, Gacanta lagu sameeyay, Ilaalinta UV 400, Ka-hortagga Milicsiga, Lens 3 Bisadood, Farshaxan Gacmeed, Eco-Friendly.
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiiska bamboo, kiishka microfiber bilaash ah, marada nadiifinta microfiber ee bilaashka ah, muraayadaha muraayadaha bilaashka ah, kaarka tijaabada ee qeexida bilaashka ah!
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.5 inji - Dhererka Frame: 1.75 inji - Dhererka Macbadka: 5.5 inji.
qiimaha joogtada ah $ 61.58 Keydso $ -61.58
Cherry Wood iyo Muraayadaha muraayadaha loo yaqaan 'Acetate Polarized Slass', Handcrafted, UV 400 Protection, Kahortaga Milicsiga Bisadaha 3 Lenses, Eco-Friendly.
Waxaa ku jira: Muraayadaha indhaha, Muraayadaha Microfiber Bilaash ah, Maro Nadiifinta Microfiberka Bilaashka ah, Xargaha Muraayadaha Bilaashka ah iyo Kaarka Imtixaanka Bilaashka ah ee Bilaashka ah!
Acetate waa caag aan xasaasiyad lahayn oo laga sameeyo dhirta. Si ka duwan balaastikyada ku saleysan batroolka, balaastikada acetate-ka waa kuwo deegaanka u roon maadaama ay ka sameysan yihiin waxyaabo dabiici ah oo dib loo cusboonaysiin karo oo waqti ka dib u baaba'a.
Farsamada gacanta Labada muraayadood oo 'Engleberts' ah ayaa si shaqsiyan loogu farsameeyay alwaax qaali ah iyo farshaxanno xardhan. Kala duwanaanshaha miraha alwaaxda awgood, labadoodaba si siman iskumid iskama noqon doonaan. Sidee kuu kala duwan yahay.
Muraayadaha muraayadaha ee 'Jase New York Royce' waxay soo bandhigaan qaab afargeesle ah oo leh macbadyo iskutallaab ah oo bir ah oo dhalaalaya oo iftiiminaya iftiinka. Waxaa loogu talagalay inay ku daydaan farshaxan farshaxan ah oo loo isticmaalo in lagu abuuro saamayn cod leh iyada oo la xariiqayo xarriiqyo isbarbar socda. Kuwaan ku dhaji wejigaaga oo waxaa laguu dammaanad qaadayaa inaad dhalaalayso.
qiimaha joogtada ah $ 75.88 Keydso $ -75.88
Muraayadaha Cherry Wood iyo Acetate Muraayadaha Muraayadda oo leh Kiiska Bamboo. Farsamada gacanta, UV 400 Ilaalinta, Bisadaha ka hortagga milicsiga 3 Lens, Eco-Friendly.
qiimaha joogtada ah $ 92.38 Keydso $ -92.38
100% Muraayadaha Muraayadaha Iskudhafka ah ee looxanka badan, Muraayadaha Madoow ee Madoow, Gacanta Lagu Sameeyay, Ilaalinta UV 400, Ka-hortagga Milicsiga iyo Lens 3 CAT, Farshaxan Gacmeed, Eco-Friendly.
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, Microfiber kiish lacag la'aan ah, Maro nadiifinta Microfiber lacag la'aan ah, muraayadaha muraayadaha muraayadaha bilaashka ah, kaarka tijaabada ee qeexida bilaashka ah iyo Gaadiid lacag la'aan ah!
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.75 inji - Dhererka Frame: 1.75 inji - Dhererka Macbadka: 5.62 inji.
Dareennadaadu waxay u socdaan si loo helo Ammaanno!
qiimaha joogtada ah $ 107.78 Keydso $ -107.78
100% Muraayadaha Nadiifinta Naadiga Kaydka ah ee Iskudhafka ah, Muraayadaha Madoow ee Madoow, Gacanta Lagu Sameeyay, Ilaalinta UV 400, Ka-hortagga Milicsiga iyo Lens 3 CAT, Farshaxan Gacmeed, Eco-Friendly
Waxaa ka mid ah: muraayadaha indhaha, kiiska bamboo, kiishka microfiber bilaash ah, dharka nadiifinta microfiber bilaashka ah, muraayadaha muraayadaha bilaashka ah iyo kaarka tijaabada bilaashka ah ee bilaashka ah.
qiimaha joogtada ah $ 81.38 Keydso $ -81.38
Aragtida muraayadaha indhaha waxay u egtahay tan lagu eego muraayadaha indhaha, midabadaada laguma qaldi doono muraayadaha indhaha casaanka / liinta.
Lens Muraayadaha Qorrax dhaca oo wata Frame Full Bamboo Bamboo iyo Kiis, Kala Adag, Gacan Lagu Sameeyay, UV 400 Ilaalin, Bisado Kahortaga Milicsiga 3 Lens, Eco-Friendly.
Muraayadaha muraayadda midabaysan ee Granite oo leh Kiis, Kala-qaybsanaan, Qalab gacmeed, UV 400 Ilaalinta, Bisadaha Ka-hortagga Milicsiga 3 Lens, Eco-Friendly.
Qiyaasta: Wareegga Meelaha: 5.4 inji - Dhererka Frame: 1.9 inji - Dhererka Macbadka: 5.5 inji.
qiimaha joogtada ah $ 56.32 Keydso $ -56.32
Muraayadaha muraayadaha ee loo yaqaan 'Zebrawood Muraayadaha' oo leh Lenses Blue Polarized, Handcrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Reflect 3 Lenses, Eco-Friendly.